အရည်အသွေးမြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းဆိုင် လက်ဆောင်အိတ်ထုပ်ပိုးမှု စိတ်ကြိုက်စက္ကူ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အမှတ်အသား ပုံနှိပ်စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | လန်းဟိုင်း
စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသော ဇိမ်ခံဆိုင် လက်ဆောင်အိတ်ထုပ်ပိုးမှု စိတ်ကြိုက်စက္ကူ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လိုဂိုပုံနှိပ်ထားသော လက်ဆောင်အိတ်
ပစ္စည်း- 210-250gsm C1S အဖြူရောင်ကတ်စတော့အိတ်
အပြီးသတ်ခြင်း- Glossy/matte lamination
အရွယ်အစား- 24*28*12cm/ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
ထုတ်ကုန်အမည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသော ဇိမ်ခံဆိုင် လက်ဆောင်အိတ်ထုပ်ပိုးမှု စိတ်ကြိုက်စက္ကူ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လိုဂိုပုံနှိပ်ထားသော လက်ဆောင်အိတ်
ပစ္စည်း 210-250gsm C1S အဖြူရောင်ကတ်စတိုးစာရွက်
ပြီးသွားတယ်။ Glossy/matte lamination
အရွယ်အစား 24*28*12cm/ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
ကိုင်တွယ်ပါ။ ချည်ကြိုး၊ နိုင်လွန်ကြိုး၊ ဖဲကြိုး၊ စက္ကူလိမ်လက်ကိုင်
ပုံနှိပ်ခြင်း။ ပိုးပုံနှိပ်ခြင်း၊ အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူဒဏ်ခတ်ခြင်း၊ UV စသည်တို့။
အသုံးပြုမှု ပရိုမိုးရှင်း၊ ကြော်ငြာ၊ စျေးဝယ်ပက်ကေ့
သင့်အကိုးအကားအတွက် ပုံမှန်အရွယ်အစား (အကျယ်*အတိမ်*အမြင့်)
အရွယ်အစားငယ်(မီလီမီတာ) အလတ်စားအရွယ်အစား(မီလီမီတာ) အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) အပိုကြီးမားသည့်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ)
မှတ်ချက်- ဤဇယားကို ကိုးကားရန်အတွက်သာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် မည်သည့်အရွယ်အစားကိုမဆို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
FOB ဆိပ်ကမ်း ရှန်ဟိုင်း၊ ရှန်ဟိုင်း၊ နင်းဘို၊ ကွမ်ကျိုး၊ ချင်ဒေါင်း
နမူနာ ပို့ဆောင်ချိန် 1-7 ရက်
ပို့ဆောင်ချိန် 2-5 ပတ်၊ QTY ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ထုပ်ပိုးခြင်း။ OPP အိတ်ထဲတွင်ထုပ်ပိုးပြီး 200 ကျပ်အိတ်ကို လှည်းတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
mock up ထုတ်လုပ်မှုကို ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီ၊ ဖောက်သည်က ပံ့ပိုးပေးသည့် အနုပညာလက်ရာဖြင့် ထုတ်ကုန်အမြင်အာရုံကို ဖန်တီးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပြင်အဆင် ဒီဇိုင်း ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ ပေးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ပုံနှိပ်ထားသော အနုပညာလက်ရာ ကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက်၊ အောက်ပါအတိုင်း လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရန် သုံးစွဲသူများ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် AI၊ EPS၊ PSD၊ PDF ဖော်မတ်ဖြင့် အနုပညာလက်ရာများဖြင့် လုပ်ဆောင်လိုပါသည်။
အနုပညာလက်ရာကို ပုံသဏ္ဍာန်ပုံသွင်းခြင်း၊ လမ်းကြောင်းပြခြင်း၊ အစီအစဥ်ပြုလုပ်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
အသုံးပြုထားသော ပုံများ၏ resolution သည် အနည်းဆုံး 300dpi (high resolution) ဖြစ်စေရန် သေချာပါစေ။
ရုပ်ပုံလင့်ခ်များ ပျောက်ဆုံးနေခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် အနုပညာလက်ရာတွင် အသုံးပြုထားသော ပုံများကို ထည့်သွင်းထားကြောင်း သေချာပါစေ။
လိုဂို သို့မဟုတ် အနုပညာလက်ရာအတွက် pantone အရောင်ကုဒ်ကို ကျေးဇူးပြု၍ ပေးပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သွေးထွက်သည့်နေရာကို အနည်းဆုံး3မီလီမီတာရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
အနုပညာလက်ရာကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင် ကိုးကားမှုပြေစာအား ထောက်ခံပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံစံတူထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။ ပုံစံတူထုတ်လုပ်သည့်အချိန်သည် ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက် ကွဲပြားသည်။ ပုံစံတူအချိန်နှင့် ပို့ဆောင်ချိန်ကို ပေးထားသော quotation ဖြင့် ပေးလေ့ရှိသည်။ mock up ထုတ်လုပ်ခြင်းပြီးမြောက်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဖွဲ့သည် အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏အတည်ပြုချက်ကို စစ်ဆေးရန်အတွက် သုံးစွဲသူထံသို့ mock up သို့မဟုတ် အစစ်အမှန်နမူနာများကို ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
mock up ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ဤအဆင့်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနုပညာလက်ရာနှင့် ပတ်သက်သည့် မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမျှ ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ပေးပို့သည့်ရက်စွဲလိုင်းသည် အရေးတကြီးဖြစ်နေသောအခါတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံစံတူထုတ်လုပ်ခြင်းကို ကျော်သွားကာ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် တိုက်ရိုက်သွားပါမည်။ ထိုသို့သောကိစ္စများတွင်၊ ထုတ်လုပ်မှုကိုအတည်ပြုပြီးပါက ပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ဖောက်သည်ကသေချာစေရမည်။ ပထမအသုတ်၏ ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုရန် အချိန်လုံလောက်ပါက သုံးစွဲသူထံ ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
1. အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုပြီး eco-friendly
2. ဖောက်သည်ဒီဇိုင်းအရ ကွဲပြားခြားနားသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ
3.Full-အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ကိရိယာများနှင့် one-stop ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ထုပ်ပိုးမှုစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် 4.9 နှစ်တင်ပို့မှုအတွေ့အကြုံ
စျေးဝယ်ခြင်း၊ အဝတ်အစား၊ လက်ဆောင်၊ ပရိုမိုးရှင်း၊ ကြော်ငြာနှင့် အမှတ်တရများအတွက် သက်ဆိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်း Art Paper၊ Kraft Paper၊ Ivory Board၊ Duplex Board၊ Specialty Paper
အရောင် CMYK/Pantone အရောင်
အရွယ်အစား သင်၏တောင်းဆိုမှုများအပေါ်အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
အထူ 150gsm၊ 210gsm၊ 250gsm၊ 300gsm သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
မျက်နှာပြင် အလှဆင်ခြင်း။ Glossy/Matte Lamination, Gold/Silver Hot Foil, Embossing/Debossing, Spot UV, Vanishing စသည်တို့
ပုံနှိပ်နည်း စကရင်ပုံနှိပ်ခြင်း/အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း/Flexo ပရင့်ထုတ်ခြင်း။
ကိုင်တွယ်အမျိုးအစားများ ဖဲကြိုးလက်ကိုင်၊ PP ကြိုးလက်ကိုင်၊ ချည်လက်ကိုင်၊ Grosgrain လက်ကိုင်၊ နိုင်လွန်လက်ကိုင်၊ ကောက်ကွေးစက္ကူလက်ကိုင်၊ ပြားချပ်ချပ်စက္ကူလက်ကိုင်၊ သေသပ်လက်ကိုင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော
ထူးခြားချက် တာရှည်ခံ၊ ဂေဟစနစ်ဖော်ရွေသော၊ လေးလံသော၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အနုပညာလက်ရာဖော်မတ် AI/CDR/EPS/PDF ဖော်မတ်
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပစ္စည်းမှအစ လုပ်ငန်းစဉ်အထိ အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများကို အဆင့်တိုင်းတွင် တင်းကြပ်စွာ စစ်ဆေးပြီး ခြေရာခံပါသည်။
နမူနာအချိန် 1-2 ရက်
အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) အလယ်အလတ်အရွယ်အစား(မီလီမီတာ) အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) ပိုကြီးသောအရွယ်အစား(mm)
၁၁၀*၅၀*၁၉၀ 190*90*320 300*130*415 435*130*540
၁၂၀*၆၀*၁၉၅ ၂၂၀*၁၀၀*၂၇၅ 310*130*415 350*150*440
160*80*250 205*100*255 ၃၂၀*၁၄၀*၄၅၀ 440*160*480
180*80*250 ၂၆၀*၁၁၀*၄၁၅ 280*130*350 440*140*540
1. သင်သည် စက်ရုံ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှု ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 100% Factory အထူးသဖြင့် နှစ် 20 ထုပ်ပိုးမှုထုတ်ကုန်များပြုလုပ်သည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုဖြင့် တံဆိပ်ခတ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် ပုံနှိပ်နိုင်ပါသည်။
3. သင်မဝယ်မီ သေတ္တာ/အိတ်များ၏ အထောက်အထားများ ပေးဆောင်ပါသလား။
သေချာပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မဝယ်ယူမီ ထုတ်လုပ်မှုနမူနာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
4. ကုန်ပစ္စည်းများကို Pallets များပေါ်တွင်တင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများကို pallets ပေါ်တွင်တင်ပါမည်။
ကုန်ပစ္စည်းများကို ပလပ်စတစ်ဖလင်ဖြင့် ဦးစွာထုပ်ပိုးပြီး ထုပ်ပိုးထားသော သေတ္တာထဲတွင် ထုပ်ပိုးထားပါမည်။ ၎င်းသည် သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို စိုစွတ်မှုနှင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
6. သေးငယ်သော စက္ကူသေတ္တာ/အိတ်အရွယ်အစားကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အရွယ်အစားအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား။
7. ပေးပို့ခြင်း၏ စည်းကမ်းချက်များသည် အဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် EXW၊ FOB၊ CNF၊ DDU၊ DDP စသည်တို့ကို လက်ခံပါသည်။
8. နမူနာများရယူရန် မည်မျှကြာကြာ မျှော်လင့်နိုင်မည်နည်း။
နမူနာအခကြေးငွေကို ပေးဆောင်ပြီး နောက်ဆုံးပုံနှိပ်ဖိုင်များကို အတည်ပြုပြီးနောက်၊ နမူနာများသည် 3-7 ရက်အတွင်း အဆင်သင့်ဖြစ်ပါမည်။ နမူနာများကို အမြန်မှတစ်ဆင့် သင့်ထံ ပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး 3-5 ရက်အတွင်း ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
9. ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဒီဇိုင်းကို သင်လုပ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် စက္ကူပုံး/အိတ်ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။ သင့်စိတ်ကူးကို ပြောပြပါ၊ သင့်စိတ်ကူးကို ပြီးပြည့်စုံသော သေတ္တာများ/အိတ်များအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
kiki@shlanghai.cn သို့ အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင့်လိုအပ်ချက်များ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တတ်နိုင်သမျှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ပထမအကြိမ်တွင် ကမ်းလှမ်းချက်ကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်၊ နှောင့်နှေးမှုများရှိပါက whatsApp၊ Skype သို့မဟုတ် အခြားသော လက်ငင်းနည်းလမ်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
11. မင်းရဲ့အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးဖို့ နမူနာတစ်ခုကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
စျေးနှုန်းအတည်ပြုပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်နမူနာများကိုသင်လိုအပ်နိုင်သည်။ အမြန်ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတတ်နိုင်သရွေ့ ဒီဇိုင်းနှင့်စက္ကူအရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ဗလာနမူနာအတွက်အခမဲ့နမူနာများကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ပုံနှိပ်နမူနာများအတွက်၊ ကုန်ကျစရိတ်ကာမိစေရန် $30-$100 စစ်ဆေးပါမည်။ ရုပ်ရှင်နှင့်ပုံနှိပ်ခြင်းတွင်။ အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်နမူနာကုန်ကျစရိတ်ကိုပြန်အမ်းနိုင်သည်။
12. ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကို သင်လက်ခံပါသလဲ။
AI၊ PDF၊ CDR စသည်ဖြင့်
13. ကုန်ပစ္စည်းများ မည်သို့ပို့ဆောင်မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ထံ မတူညီသော ပို့ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ပါသည်။
1. DHL, UPS, Fedex, စသည်တို့ကဲ့သို့ ကယ်ရီယာဖြင့်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ 5-7 ရက်အတွင်း တံခါးပေါက်ကနေ ရောက်ရှိလာပါတယ်။
2. များသောအားဖြင့် 3-4 ရက်အတွင်းလေကြောင်းဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိရန်လေကြောင်း။
3. ပင်လယ်မှပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိရန်, ပုံမှန်အားဖြင့် 15-30 ရက်။
14. အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ဦးဆောင်အချိန်က ဘာလဲ။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ မှာယူမှုအရေအတွက်နဲ့ သင်အော်ဒါတင်တဲ့ရာသီပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 7-15 ရက်အတွင်း 10000pcs ခန့်။
ယခင်- စိတ်တိုင်းကျ စိတ်ကြိုက်ရိုက်နှိပ်ထားသော လိုဂို အဖြူရောင် Matte Art Paper Shopping Black Paper Bag လက်ဆောင်
နောက်တစ်ခု: လိမ်/ပြား စက္ကူလက်ကိုင်ပါသော Kraft စက္ကူကော်ဖီအိတ်
မင်္ဂလာဆောင် စက္ကူအိတ် လက်ဆောင်
Window Gift Paper Bag
စိတ်တိုင်းကျ စိတ်ကြိုက်ရိုက်နှိပ်ထားသော လိုဂို အဖြူရောင် Matte Ar...
စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ် Luxury Boutique အင်္ကျီ...